डा. केसीको सत्याग्रह आज दोस्रो दिनमा
काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले आमरण अनशन सुरु गरेको दोस्रो दिन पुगेको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै डा. केसीले बुधबारबाट इलाममा अनशन सुरु गरेका हुन् ।
१५ औं अनशन तोड्ने सिलसिलामा सरकारसँग गरेको सहमति विपरित संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विधेयक पारित गरेपछि डा. केसीले अनसन सुरु गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखाएको प्रतिबद्धता विस्तारै माफियाहरुको घेरवन्दीमा परेर कठोर बन्दै प्रबिद्धताबाट पछि हटेको उनले बताएका छन् ।
६ बुँदे माग राख्दै डा. केसीले बुधबार ५ बजेबाट आमरण अनशन सुरु गरेका हुन् । उनी अहिले इलाम सदरमुकामको फुलगाछी स्थित शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयको पुरानो कार्यालयमा अनशन सुरु गरेका हुन् ।
यसअघि बुधबारनै संघीय संसद्को प्रतिनिधीसभा अन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन बहुमतले पारित भएको थियो । तर, प्रतिपक्षि दल काँग्रेसले भने त्यसमा सात बुँदे फरक मत राख्दै असहमति जनाएको थियो ।